यिनै हुन् धादीङमा घाँस बो’केर घर जाँदै गर्दा डोजर चालकले जि’उदै पु’रेकी सरस्वती कुमाल ! – Online Nepal Site
मुख्य पृष्ठ /News/यिनै हुन् धादीङमा घाँस बो’केर घर जाँदै गर्दा डोजर चालकले जि’उदै पु’रेकी सरस्वती कुमाल !
धादिङमा एक महिलालाई घा’इते बनाएपछि ए’क्स्काभेटरले पु’रेको थियो ।धादिङको त्रिपुरासुन्दरी १ सल्यानटार क्षेत्रमा सडक निर्माणको काम गरिरहेको ए’क्स्काभेटरले घाँस बो’केर जाँदै गरेकी महिलालाई ठ’क्कर दिएको थियो ।ठ’क्करबाट उनी सोही सडकको खा’ल्डोमा ख’सेकी थिइन् । त्यसपछि चालकले चारैतर्फको माटो सोही खाल्डोमा ख’साएर घा’इते भएकी सरस्वती कुमाललाई पु’रेका थिए ।
एस्क्याभेटरले ठक्करपछि कुमाल खाल्डोमा खसिन् । घाइते अवस्थाकी महिलालाई उद्दार गर्नुको साटो चालकले वरपरको माटो खनेर महिलालाई त्यही खाल्टोमा पुरेका थिए ।
काठमाडौंबाट सल्यानटार हुँदै आरुघाटतर्फ आउँदै गरेको बसका यात्रुले सो घटना देखेपछि घटना बाहिर आएको हो । ‘एक्स्काभेटरले मान्छे पुर्‍यो’ भन्दै बसका यात्रुले हल्ला गरेपछि चालक बुढाथोकी भागेका थिए ।
घटनापछि उत्तेजित भीडले हरितारा कन्स्ट्रक्सनले प्रयोगमा ल्याएको उक्त एक्स्काभेटरमा आगजनी गरेको थियो । चालकलाई तत्काल पक्राउ गरी कानुनसम्मत कारबाही हुनुपर्ने स्थानीयको माग छ । तर घटनालगत्तै फरार दाङ घर भएका चालक बुढाथोकी भने अझै पक्राउ पर्न सकेका छैनन् । ***भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला***